Paloturvallisuutta kotona - Somali by Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Issuu
OO BARI BADBAADA AH
AMNIGA DABKA EE GURIGA Degmada/caasimada: _________________________________________________________ Ciwaanka wadada: _________________________________________________________ Furaha albaabka: _________________________________________________________ Lambarka taleefonka dagaha: _________________________________________________________
Ku haay warqadaan meesha aad ka heli kartid. 1
●	Ku dhaji alaarmiga qiiqa saqafka. ●	Badel batariga alaarmiga qiiqa haljeer sannadkii. ●	Dadka dagan waa in ay iibsadaan alaarmiga qiiqa gaarkooda ah. ●	Alaarmiga qiiqa looma isticmaali karo in loogu yeero adeegyada degdega. Waa in aad wacdaa nafsadaada lambarka degdega.
●	Tijaabi alaarmiga qiiqa haljeer bishii adiga oo riixayo badhanka tijaabada. ●	Alaarmiga qiiqa wuxuu kugu yeerayaa dabka bilowday.
Finland guri walba waa in uu lahaadaa alaamyada qiiqa. Sida deegaanka, waa in aad hubtaa in ay ku jiraan alaarmiga qiiqa oo ku fillan gurigaaga. Waa in aad gelisaa alaarmiga qiiqa saqafka sariiraha oo dhan (MH), wadada hoolka (ET) iyo qolka fadhiga (OH). 2
Geli alaarmiga qiiqa: ● qololka jiifka ● wadada hoolka ● qolka fadhiga
Jikada ●	Kariyaha waa diyaarinta cuntada kaliya. ●	Kariyaha ma ahan kululeeye dheeraad ah. Waa in aadan isticmaalin si aad isugu daydid iyo u kululeysid gurigaaga. ●	Dami kariyaha marka aadan isticmaaleynin. ●	Dooro heer kululka ee kariyaha ama jikada (saxanka kulul) ee ku haboon nooca cuntada aad karineysid.
●	Ha gelin warqad, diishka baxda, jiko celiyaha ama wax kale oo si sahlan u qabanayo dabka kariyaha. 4
●	Foorno nadiif ah oo nidaamsan waxay ka badbaadsantahay mid qariban. Foornooyinka qariban waxay sababi karaan dab.
●	Dami qalabka korontada marka aadan isticmaaleynin. ●	Ka bixi kafee sameeyaha, kirliga iyo dubaha.
●	Buufi-nadiidi gadaasha farantijeerka iyo qaboojiyaha ugu yaraan haljeer sannadkii.
●	Marka aad ka saareysid ●	Ka bixi qalabka korontada fiilada sokotka, ka baqo furka, sokotka darbiga marka aadan ma ahan fiilada (hogaanka). isticmaaleynin iyada, tusaale, mashiinka dhar dhaqida ama sameeyaha kafeega.
●	Dib ha ugu xirin madaxa ●	Ha isticmaalin madaxa go’an fiilada midba midka kale. ama sokotka. Ku ilaali madaxa fiilada busta.
●	Haka tagin feero kulul, dubaha ama dubaha baakideysan. ●	Ha isticmaalin qalabka korontada marka aadan guriga joogin. Tusaale ahaan, qalabka dhaqida waa in aan looga tagin marka aad ka tageysid guriga ama dabaqa. ●	Marwalba aqri iyo raac tilmaamaha la imaadaan qalabka korontada. ●	Qalabka korontada go’an waxay keeni kartaa dab. Kaliya farsamo yaqaan ku haboon ayaa sameyn karo qalabka korontada go’an.
●	Waxba ha gelin nalka. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan boos banaan oo agagaarka nalka ah.
●	Dami telefishanka adiga oo riixayo badhanka dabka habeenkii iyo marka aad banaanka aadid. ●	Haddii aad damisid telefishanka adiga oo isticmaalayo rimuutka, telefishanka weli waa daaranyahay.
●	Waxba ha dul saarin talefishinka. ●	Si joogta ah u nadiifi madaxa telefishanka iyo qeybaha kore ee daloolada godadka.
●	Isha ku haay shumacyada gubanayo marwalba.
●	Shumacyada waa in aanan lagu daarin gudaha, balkoonada ama banaanka.
●	Shumac celiyaha waa in laga sameeyaa qalabka aanan guban; tusaale, birta ama dhalada.
●	Shumac celiye walba (shumadaca ku daboolan birta) waa in uu lahaadaa shumac celiyahiisa gaarka ah. 9
●	Waa in aadan sigaar ku cabin sariirta ama fadhiga.
●	Ha isticmaalin (dubitaanka BBQ) gudaha ama baalkonka.
●	U dhig haashka sigaarkaaga si ku haboon. ●	Haashka sigaarkaaga waa in aanan lagu tuurin weelka qashinka. ●	Ha ugu tagin jantisigaarada ama taraqyada meesha ay carruurta ka heli karaan.
●	Baalkonka ma ahan aag keyd ah
Qolka isku kululeynta
●	Ha ku qalijin dharka qolka isku kululeynta. ●	Waxba ha dul saarin jikada qolka isku kululeynta. ●	Qolka isku kululeynta ma ahan aaga keydin.
Kululeynta iyo hiirarka ●	Haku daboolin hiitarada korontada daahyada, tusaale. ●	Waa in aadan qalajin hiitarada korontada.
â&#x2014;?	Hwaxba ha uga tagin jaranjarada, tusaale. gaariyaasha (gaariyada ilmaha) ama kabaha/ buudadka. Waxaa jira halis ah dab ah. â&#x2014;?	Ma jiro wax la dhigi karo meelaha la maro safiitada ama qeybta hoose.
Ka baxsanayo dhismaha; haddii uu jiro dab dabaq kale: ●	Haddii aysan jirin wax qiiq ah ee jaranjarada (ee jaranjarooyinka), ugu baxso dhinaca jaranjarooyinka. Xir albaabka dabaqaaga. Ha isticmaalin wiishka. ●	Haddii ay jiraan qiiqa jaranjarooyinka (jaranjarada), joog dabaqaaga iyo xir albaabka hore. ●	Haddii uu soo galo qiiq yar dabaqaaga, aad baalkoniga iyo xir albaabka kaa dambeeyo. U soo wac caawin iyo sug ilaa dab damiska (waaxda dabka) ay kugu caawiso badbaadada. Sug dab damiska; ha boodin. ●	Ha aadin baalkoniga haddii dabka uu ku jiro dabaqa hoose. Soo wax lambarka degdega 112.
Waxa la sameeyo haddii uu dab ka j
●	Isku day iyo digniin siisid iyo aad badbaadisid kuwa kale.
●	Ka tag aaga halka dabka uu yahay.
●	Is kuday in aad damisid dabka. Nafsadaada wax halis ha gelin.
●	Xir albaabada, daaqadaha iyo qalabyada hawada, haddii aad haysid waqti sidaas lagu sameeyo.
●	Aastaamahaan amniga dabka waxay muujiyaan wadada ugu sahlan amniga. 14
●	Ka soo wac 112 meel ammaan ah.
●	Dab damiyaha
●	Ku jaheey dab damiska goobta dabka.
●	Badhanka – riix si aad u wacdid dab damiska 15
Sida loo isticmaalo bustaha dabka ●	Waa in aad isticmaashaa bustaha dabka si loo damiyo dab yar, tusaale. Haddii kafee sameeyaha, digsiga ama talefishanka wuxuu qabtaa dabka. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa bustaha dabka oo isku daboolaan dadka dharkooda dabka gaaray.
●	Xajinta bustaha dabka ee geesaska. Qabo bustaha dabka inta u dhaxeyso naftaada iyo dabka; ilaali gacmahaaga.
●	Ugu meeley bustaha dabka si wanaagsan qeybta gubaneyso.
●	Bustaha dabka waa in uu ahaadaa dhirir ku filan ooa ah, tusaale. 120X180 cm. ●	Ka raarici bustaha dabka boorsadeeda keydka ee darbiga jikada. ●	Badel bustaha haduu dhaawacmo.
●	Hubi in aysan dabeyl galin waxyaabah gubanayo. Dami kariyaha iyo hawo fiiltareeyaha.
●	Goortii dabka uu baxo, ka dhaqaaji sheyga digsiga kulul. Ha qaboobo. ●	Soo wac 112. 17
Haddii degdeg jiro, soo wac 112 Soo wac lambarka degdega kaliya haddii uu degdeg jiro. Waxaad soo wici kartaa lambarka degdega 112 oo bilaash ah taleefon walba iyada oo aan la isticmaaleynin furaha aaga. Soo wac lambarka degdega 112 ee xaaladaha xigga, tusaale: •	waxaad ogaatay shilka ama dabka •	waxaad ogaatay in dambi la sameeyay ama mid la sameeyay •	waxaad u baahantahay ambalaansaha ama shaqalaha bulshada 1.	Soo wac lambarka degdega nafsadaada, haddii aad awoodid Waa muhiim in lambarka degdega uu soo waco qofka uu dabka saameeyay ama qof joogo goobta dhacdada.
2.	Ka jawaab su’aalaha lagu weydiiyo Su’aalaha ma daahinayaan caawinta imaanshaha. Xafiiska shaqada ku jiro wuxuu caawin usoo diri karaa iyada oo weli ku hadlayo taleefonka. 3.	Isa saar kaliya marka laguu sheego sidaas Sarkaalka shaqada ku jiro ayaa kula socodsiinayo marka aad isa saari kartid. Haddii aad joojiso wicitaanka sida ugu dhaqsiha badan, waxaa laga yaabaa in ay daahiso imaanshaha caawinta. Soo wac markale isbedelada xaalada.
Lambarka degdega 112
Badbaadada dabka guriga Qoraalkan waxaa loo naqshadeeyay inta ugu badan in loo isticmaalo goortii socdaalka loo sheego badbaada dabka guriga. Waxay ku qorantahay Ingiriis cad. Badbaadada Dabka ee waraaqaha guriga waxaa lagu soo saarsay sida xigta, iyo taageerada Maalgelinta Illaalada Dabka: ● Finnish Ururka Badbaadinta Qaranka ● Helsinki Waaxda Badbaadinta Magaalada ● Tampere Waaxda Badbaadinta Goboleedka ● Finnish Gollaha Qaxootiga / mashruuca KOTILO ● Metsälä Xarunta Soo dhaweynta Qoraalka waxaa Maalgeliyay Maalgelinta Ilaalada Dabka
Ururka Badbaadinta Qaranka Finnish (SPEK) Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Tal. (09) 476 112, fakis (09) 4761 1400 20
Paloturvallisuutta kotona - Somali